Ihe Ị Ga-eme ma Nwa Gị Na-agha Ụgha | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ka e were ya na e nwere otu nwaanyị nwa ya dị afọ ise. Ka nwa ahụ nọ n’ime ụlọ na-egwu egwu, nwaanyị ahụ nụrụ ka ihe dara n’ala kụwaa. Mgbe ọ batara, ọ hụrụ ebe nwa ahụ kwụ n’akụkụ ihe ahụ. Otú ihu ya dị agwala ya na ọ bụ ya kụwara ya.
Ya ejiri iwe jụọ ya, sị: “Ònye kụwara ihe a?”
Ya azaa ya ozugbo, sị: “Amaghị m.”
Ihe a abụghị nke mbụ ọ na-agha ụgha. Ọ bụrụ na ọ bụ gị mụrụ nwa ahụ, ì chere na ọ gaghị akwụsịli ịgha ụgha?
E nweghị ụgha dị mma. Baịbụl kwuru na Jehova Chineke kpọrọ “ire na-agha ụgha” asị. (Ilu 6:16, 17) Dị ka ihe atụ, Iwu Mozis kwuru ahụhụ a ga-ata onye ghọrọ mmadụ ibe ya aghụghọ.—Levitikọs 19:11, 12.
Ma, e nwere ụgha ndị ka ibe ha njọ. E nwere ụfọdụ ụgha jọgburu onwe ha. A na-agha ha iji mebie aha mmadụ ma ọ bụ mesie mmadụ ike. Ma, ụfọdụ ndị na-agha ụgha mgbe ha nọ ná nsogbu. O nwere ike ịbụ ka a ghara ịta ha ahụhụ ma ọ bụ ka a ghara imenye ha ihere. (Jenesis 18:12-15) N’agbanyeghị na e nweghị ụgha nke dị mma, e nwere ndị ka ibe ha njọ. Nwa gị ghaa ụgha, mata ihe mere o ji ghaa ya, burukwa afọ ole ọ dị n’obi.
Nyere nwa gị aka mgbe ọ ka dị obere. Otu nwoke aha ya bụ David Walsh kwuru na ụmụaka kwesịrị ịmụta ịna-ekwu eziokwu, ọ sọgodị ya ya bụrụ na ọ gaghị adịrị ha mfe. Mmadụ kwesịrị ịtụkwasị onye ya na ya dị ná mma obi. Ma ọ bụrụ na onye ahụ na-aghakarị ụgha, ọ gaghị atụkwasịli ya obi.
Echela na nwa gị agaghị agbanweli. Na nwa gị tụrụ asị apụtaghị na ọ ghọọla ajọ nwa. Cheta na Baịbụl sịrị na e kekọtara nzuzu na obi nwata. (Ilu 22:15) Otú ụfọdụ ụmụaka si egosi nzuzu nke ha bụ ịtụ asị. Ha nwere ike iche na ọ ga-eme ka a ghara ịta ha ahụhụ. N’ihi ya, i kwesịrị ilezi anya mara ihe ị ga-eme ya.
Chọpụta ihe mere nwa gị ji agha ụgha. Ọ̀ bụ ụjọ ihe a ga-eme ya na-atụ ya, ka ọ̀ bụ na ọ chọghị ime ihe ga-ewe gị iwe? Ọ bụrụ na nwa gị na-akọrọ ndị enyi ya ihe na-abụghị eziokwu ka ha ghara ileda ya anya, ihe mere o ji akọrọ ha ya ọ̀ bụ maka na ọ ghọtabeghị otú ihe si dị n’ụwa? Ọ bụrụ na ị mata ihe mere nwa gị ji agha ụgha, ị ga-enwe ike ịma otú ị ga-esi enyere ya aka.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 1 Ndị Kọrịnt 13:11.
Gwa ya ihe o mere, kama ịjụ ya ajụjụ. N’ihe atụ ahụ e nyere ná mbido isiokwu a, o doro nwaanyị ahụ anya na ọ bụ nwa ya kụwara ihe ahụ. Ma, ọ jụrụ ya, sị: “Ònye kụwara ihe a?” O nwere ike ịbụ na ihe mere nwa ahụ ji sị na ya amaghị bụ na ọ hụrụ na iwe ji mama ya. Ma, kama ịjụwa ya ajụjụ, mama ya gaara asị ya: “Hei, ị kụwaala ihe a.” Ọ bụrụ na ọ gwa nwa ya ihe o mere kama ịjụ ya ajụjụ, nwa ahụ agaghị atụ asị, kama ọ ga-enyere ya aka ịmụta ịna-ekwu eziokwu.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Kọlọsi 3:9.
Nwa gị kwuo eziokwu, jaa ya mma. Ụmụaka na-achọkarị ime ihe ga-atọ mama ha na papa ha ụtọ. N’ihi ya, mee ka nwa gị mata na obi ga-atọ gị ụtọ ma ọ na-ekwu eziokwu. Kụziere ya na ezinụlọ unu ejighị ikwu eziokwu eti epele nakwa na ị chọrọ ka ọ na-ekwu eziokwu mgbe niile.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Hibru 13:18.
Mee ka nwa gị ghọta na a naghị atụkwasị onye ụgha obi nakwa na a kwụsị ịtụkwasị mmadụ obi, ọ na-esi ike tupu a malite ịtụkwasị onye ahụ obi ọzọ. Mgbe ọ bụla o kwuru eziokwu, jaa ya mma. Ime otú a ga-eme ka ọ na-agba mbọ na-ekwu eziokwu. Dị ka ihe atụ, o kwuo eziokwu, i nwere ike ịsị ya, “Obi dị m ụtọ na ị na-ekwu eziokwu.”
Na-ekwu eziokwu. O doro anya na ị gaghị atụ anya na nwa gị ga na-ekwu eziokwu ma ọ bụrụ na gịnwa anaghị ekwu eziokwu. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na onye ị na-achọghị ịhụ achọrọ gị bịa, gị agwa nwa gị ka ọ gwa ya na ị nọghị ya, ị na-akụziri ya ịtụ asị.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jems 3:17.
Kụziere ya ihe Baịbụl kwuru. Ihe ndị dị na Baịbụl na akụkọ ndị a kọrọ na ya gosiri na Chineke chọrọ ka anyị na-ekwu eziokwu. Akwụkwọ Ndịàmà Jehova bipụtara nke aha ya bụ Mụta Ihe Site n’Aka Onye Ozizi Ukwu Ahụ ga-enyere gị aka ịkụziri nwa gị ihe ndị dị na Baịbụl. Isiokwu nke 22 bụ “Ihe Mere Anyị Na-ekwesịghị Iji Na-agha Ụgha.” (Gụọ ihe ụfọdụ si n’isiokwu a n’igbe bụ́ “ Akwụkwọ Ga-enyere Nwa Gị Aka.”) Akwụkwọ
‘Mgbe m bụ nwa ọhụrụ, m na-ele ihe anya dị ka nwa ọhụrụ.’—1 Ndị Kọrịnt 13:11.
“Unu adịla na-aghara ibe unu ụgha.”—Ndị Kọlọsi 3:9.
“Anyị na-achọ ka anyị na-eme ihe n’eziokwu n’ihe niile.”—Ndị Hibru 13:18.
‘Amamihe nke si n’elu adịghị ihu abụọ.’—Jems 3:17.
AKWỤKWỌ GA-ENYERE NWA GỊ AKA
“Ị pụrụ imebi otu ihe, ọ bụ ezie na i zubeghị ime otú ahụ. Ọ bụrụ na a jụọ gị onye mebiri ya, ì kwesịrị ịsị na ọ bụ nwanne gị? Ka ì kwesịrị ime dị ka a ga-asị na ị maghị otú o si mee? . . . Ihe ọ sọkwara anyị mee, mgbe niile, ịgha ụgha ga-eme ka ọ ka njọ, anyị ekwesịghịkwa ọbụna ikwu ihe na-abụchaghị eziokwu. Baịbụl na-ekwu, sị: ‘Na-ekwunụ eziokwu.’ Ọ na-ekwukwa, sị: ‘Unu adịla na-aghara ibe unu ụgha.’ Jehova na-ekwu eziokwu mgbe niile, ọ na-atụkwa anya ka anyị na-eme otú ahụ.—Ndị Efesọs 4:25; Ndị Kọlọsi 3:9.”
Ihe a si n’akwụkwọ bụ́ Mụta Ihe Site n’Aka Onye Ozizi Ukwu Ahụ.